ComWales Nzira dzekubhadhara
Kana uchisarudza nzira yekubhadhara, Isu tinotsvaga sarudzo dziri nyore, dzakachengeteka, uye dzinoteedzereka kana pane matambudziko. Shandisa tafura iri pazasi kuenzanisa nzira dzekubhadhara.
PayPal ndiyo yakasarudzika nzira yekubhadhara kune vakawanda eBay vatengi uye vatengesi. PayPal inoita kuti utumire kubhadhara nekukurumidza uye zvakachengeteka pamhepo uchishandisa kiredhiti kadhi kana kubhengi account.
Dzidza zvakawanda pamusoro kubhadhara nePayPal.
√ Kubhadhara kunoteverwa. Unogona kutevedzera mamiriro ekubhadhara kwako uchishandisa account yako kana yako PayPal account.
√ Kubhadhara chinhu chinotenderwa kutengeserana uye uye kana zvese zvikaita zvakanaka tinotora mubhadharo wako kana chinhu chako chatumira. Iwe unobhadhara zvakananga kubva ku Checkout uye kubhadhara kunoiswa zvakananga muakaunti yedu.
√ Hazvidi kuti iwe ushandise kadhi rako rechikwereti online. Iwe unogona kutamisa zvakananga kubva kubhengi rako account.
√ Kana iwe ukashandisa kadhi rechikwereti, vatengesi havaoni nhamba yako yekadhi rechikwereti. Iyo yakachengetedzwa zvakachengeteka kuburikidza nePayPal's server kuti njodzi yekushandiswa kusingabvumirwe ishoma.
√ Offers Money Back Guarantee iyo inovhara kusvika pamutengo uzere wekutenga uye yepakutanga P & P mhosva pamitero inokodzera. Ona zvizere mazwi uye mamiriro
chikwereti kadhi kana kiredhiti kadhi
Isu tinobvuma kadhi rechikwereti kana kadhi rekubhadhara makadhi kuburikidza nePayPal account yedu.
√ Kubhadhara kunoteverwa. Unogona kutevedzera mamiriro ekubhadhara kwako uchishandisa kiredhiti kadhi account yako.
√ Kubhadhara chinhu chinotenderwa kutengeserana uye uye kana zvese zvikaita zvakanaka tinotora mubhadharo wako kana chinhu chako chatumira.
√ Inopa yakaganhurirwa dhisiki yekuvhara. Makambani emakadhi echikwereti anowanzopa imwe nhanho yekuzivikanwa uye yekudzivirira kwekutenga. Bata yako kiredhiti kadhi kambani kudzidza zvakawanda.
Iwe unofanirwa kunyora ruzivo rwekadhi rako rechikwereti muwebsite yePayPal nguva yega yega yaunoraira paunenge usina account.
Hofisi yekutenga yepamutemo
Iye zvino makambani, hurumende nemamwe masisito epamutemo anogona kushandisa sarudzo iyi.
√ Mazuva makumi matanhatu ekubhadhara
√ Chikwereti miganhu che5k kusvika kumamirioni.
√ Kufanana zuva setup uye kubvumirwa
√ Batsira kuyerera kwako kwemari neine 60 mazuva ekureba.
√ Tonga account yako pamhepo uye ubhadhare neDirect chikwereti.
X Mutengo wakaderera we2.33% unokweretwa pane invoice imwe neimwe.
X Iwe unozoda kodhi yepamutemo.
X Inononoka kupfuura nzira dzekubhadhara dzemagetsi (kubvumidzwa uye kuisirwa kazhinji yakafanana nezuva rekushanda)
Mukuwedzera kune dzimwe nzira dzakabvumirwa kubhadhara, isu tinopawo sarudzo iyi.
√ Mukana wekuongorora chinhu mumunhu panguva yekubhadhara
√ Inochengetedza kushanda nesimba mutengo wepositi.
√ Vatengi vanogona kushandisa chero nzira yekubhadhara, kusanganisira mari, PayPal, kana kadhi rechikwereti.
X Inofanirwa kuronga kuunganidzira nzvimbo uye nenguva nezvitoro.
X Iwe uchada hurumende mufananidzo ID
X Inononoka kupfuura nzira dzekubhadhara dzemagetsi
X Dziviriro inosiyana nenzira yekubhadhara.
X Kana ako omunzvimbo mauri kurasikirwa nemahara emahara ekutakurisa pazvinhu zvakawanda zvinhu.
Kana iwe watenga chigadzirwa chetelecom kana chibvumirano chekutsigira isu tinoda chakananga dhidhiti.
Sign up ikozvino kubhadhara neakananga dhidhi.
√ Tumira email mwedzi wega wega wekuchaja
√ Makafukidzwa pasi pe rakananga chikwereti chechikwereti chechikwereti
X Bhengi rako rinogona kukubhadhara mari kana iwe usina mari yakakwana muaccount yako.
Bhangi Rekutumira (Kubhadhara kwakanyanya muUK)
√ Mirairo inogona kutumirwa kukero yechitatu bato Eg. basa, nongedzera kumutengi wako & zvipo kumhuri
√ Zvemacheki, mabhanga mazhinji anopa sevhisi yekubhadhara kana matambudziko akamuka cheki isati yabviswa. Mamwe masevhisi ekutumirwa kwemaposita anogona zvakare kuve nesarudzo yekumira kubhadhara kana matambudziko akamuka kubhadhara kusati kwasvika.
√ Zvekuchinjiswa kwebhangi, kubhadhara kunoiswa ipapo muakaundi yemutengesi
X Zvishoma kureba nguva apo cheki inoitwa pane yako kubhadhara.
X Kuti udzorere mari tinokutumira cheki.